« Raharaha vonoan’olona »: hosazina ireo miaramila nihoa-pefy tany Tsiroanomandidy | NewsMada
“Tsy azo ekena ny fihetsika tsy mifanaraka amin’ny soatoavina ara-miaramila ataon’ireo miaramila sasantsasany…”, hoy ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovana. Fantatra izao fa hosazina ireo miaramila nihoa-pefy, tamin’ilay “Raharaha vonoan’olona” nahafaty mpianaka , tany Bemanonga, Tsiroanomandidy.
Nandray ny andraikitra tandrify azy ireo tompon’andraikitry ny Tafika notarihin’ny Jly Rasamimanana Avisoa Lysias, taorian’ny disadisa sy ny fihetsika fihoaram-pefy nataon’ireo andiana miaramila avy ao amin’ny 2BIA Tsiroanomandidy nandritra ny iraka nataon’izy ireo tao Bemanonga, kaominina ambanivohitr’i Fihaonana, distrikan’i Tsiroanomandidy, ny faran’ny herinandro teo. Nidina tany an-toerana nankahery sy namangy ireo niharam-boina ireto delegasiona avy amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena ireto. Nisy ny fifampiresahana teo amin’ireto manamboninahitra ireto sy ny fianakavian’ireo niharam-boina manoloana iny raharaha iny. Nilaza ary nanamafy manoloana ireo fianakaviana ireo ny mpitarika ny delegasiona fa hisy ny sazy ampiharina amin’ireo miaramila nihoa-pefy tamin’ny iraka nampanaovina azy ary hamafisina ihany koa ny toromarika momba ny fitsipi-pitondrantenan’ireo miaramila mamita iraka tsy hiverenan’ny tranga toy izao.
Tsy mifanaraka amin’ny soatoavina miaramila
Tsiahivina fa tonga tao amin’ity tanàna ity ireo miaramila notarihin’ny lehibe nitarika ny hetsika nataon’izy ireo, ny zoma lasa teo, ka niteraka horohoro amin’ireo mponina ao an-tanàna. Nasain’ireo miaramila nivoaka ny raim-pianakaviana iray voalaza fa dahalo ka voatifitra avy hatrany. Nivoaka hiaro ity rainy ny zanany lahy ka notifirin’ny miaramila ihany koa. “Tsy azo ekena ny fihetsika tsy mifanaraka amin’ny soatoavina ara-miaramila ataon’ireo miaramila sasantsasany eny anivon’ny fiarahamonina”, hoy hatrany ny fanazavana.